sheeko xariir qoraal ah : Juxaa iyo nin kii Caqliga Badnaa - iftineducation.com
iftineducation.com – Juxaa iyo nin kii Caqliga Badnaa
Beri baa waxaa jiray nin Juxaa la yiraahdo maalin malmaha ka mid ah ayaa juxaa wuxuu aaday beeraha wuxuuna ka doonay dhis tan guriha badiyaha lagu dhiso ka bacdi wuxu tegay eegkii wuxuuna is yiri laantan ka goo inta korkeeda fuulay laantii uu doonayey inuu gooyo.
Isagoo ku dul fadhiya laantii uu goynayey ayuu nin meesha soo maray oo arkay sanca xumida ninkan haysata wuxuuna ku yiri -war miyaad waalan tahay laanta aad ku fadhido ha gooynin waad soo dhacaysaaye, ka bacdi juxaa dheg uma dhigin ninkii, ninkiina waa is ka dhaafay cabaar ka bacdi juxaa dhukuu ku soo dhacay ilayn laantii uu ku fadhiyey buu gooyayeye.
Ka dibna ninkii wax u sheegayey oo meel halkaas ah sii socda buu ka daba orday oo ku yiri -war bal kaalay nin wax walba og baad tahay nin kaagan ii sheegay hadaan laanta geedka ku taaaley gooyo inaan soo dhacayo, ninkii waa yaabay markuu juxaa sidaa ku yiri.
juxaa wuxuu nikii ku yiri war nin wax walba ogbaad tahaye waxaad ii sheegtaa maalintaan dhimanayo anigu waadigan markii hore iisheegay in aan ka soo dhacayo haddii aan laanta gooyee, ninkii in tuu yabay buu gartay in uu ninkan nacas laga roone ah yahay markaas buu yiri waxaad dhimanaysaa marka dameerkaagu qayliyo wuuna ka tagay.
Juxaa wuxuu maalintii oo dhan firinayay dameerkiisa afkiisi, dameera waa dameer marku dameero arko buu qayliya cabaar ka bacdi dameerkii baa arkay dameero kale markaasuu ciyey oo qaylo dheer ku dhuftay dhowr jeer.
Juxaa waa tii ninkii loosii shegay marka dameerkaagu qayliyo waad dhimanaysaa e wuu ramaystay sheegadii ninku ku yiri oo wuxuu qaatay mro- cad wuxuuna aaday xabaalaha dadka lagu duugo isago isleh waad dhimanaysa wuxuu juxaa dhex seexda xaboolo magaalada ka baxsan.
Waxaa meeshi xabalaha agtooda ahayd soo maray dad magaalada ka lunsan oo wayay wadadii ay u mari lahayeen waxana arkeen qof xabaalaha dhex jiifa waxay is yirahdeen ruuxan waydiiya meel magalada loo maro, waxay yirahdeen war qofkaan hurda meeshow toos oo ma noo sheegi karaysaa meel magaaladii naga xigto waa wada habawnaye?
Markaas baa juxaa yiri markaan aduunka ku noola waxaa loo mari jiray wadaa agtiin ah markaas bay yaabeen oo yirahdeen nin kan miyuu waalan yahay wuxuu ka wadaa markaan aduunka ku noolaa waxay waydiiyiin wuxuu kalmadaa u leeyahay juxaa wuxuu dadkii u sheegay sheekadii oo dhan ka bacdi waxaa yirhadeen sidaas laguma dhintee ka kac meesha oo ina keen !
Murti: Ka fiirso intaadan fali ficilka aad maagan tahay inaad sameyso, jooji haduu yahay ficil khaldan, ha rumeysan wax walba oo ruux kuu sheego, rumeyso wixii macquul ah.
Ajashaada ilaah baa haya kaligiis baana og xilliga aad dhimanyso in kastoo Soomaalidu ku maahmaahdo nin weyn wadkii dili lahaa waa yaqaanaa.